သူတို့ရဲ့အိမ်မှာသင်္ကြန်ရကစားနေတာကို အပြစ်ပြောလာတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးကို ရိုင်းပြစွာပြန်လည်ပြောဆိုနေတဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်….. – Cele Snap
သူတို့ရဲ့အိမ်မှာသင်္ကြန်ရကစားနေတာကို အပြစ်ပြောလာတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးကို ရိုင်းပြစွာပြန်လည်ပြောဆိုနေတဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်…..
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… အနုပညာလောကမှာ တေးသီချင်းများစွာကို သီဆိုထားတဲ့ အဆိုတော်မိုးမိုးဟာဆိုရင် အခုလက်ရှိမှာ မော်ဒယ်မြတ်ပီတိမိုးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ လက်ထပ်ထားပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိ်ုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
မိုးမိုးဟာ စစ်ကောင်စီက ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ ယုန်လေးတို့နဲ့အတူ တက်ရောက်ခဲ့တာပါနော်။ ဒါ့အပြင် လတ်တလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ကိုဗစ်ကာလသင်္ကြန်တွင်းမှာ Live လွှင့်နေရင်း ပရိသတ်တွေကို မချေမငံပြန်ပြောနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လည်း အတော်ကို ပြန့်နှံ့နေတာပါနော်။
ကိုရီးယားတွင် နေထိုင်တဲ့ ဆရာမ ချမ်းမြမြသော်ကလည်း ” အဆိုတော် မိုးမိုးဆိုတဲ့ ဝက်ကလည်း ကိုက်လိုက်တာတငမ်းငမ်းနဲ့ မြင်လို့တောင် မကောင်းဘူး။ သူတို့ ပြောလို့သာ ပြောရတာ အဆိုတော်လို့။ အနူတောထဲ လူချော လုပ်တဲ့ အဆင့်လောက်နဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ် ကောက်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆိုတော် အနုပညာသည် လုပ်နေတဲ့ ဟာတွေ။ အသံက လမ်းထဲက ပဲပြုတ်သည် မထားထက် ပြဲသေးတယ်။
အဆင့်မှီ အတန်းမှီနဲ့ ဆိုနိုင်တဲ့နိုင်ငံကျော်ဆိုရင် liveထဲကနေ ထွက်လာပြီး အုပ်စုလိုက် ကိုက်မလား မသိဘူး။ ဝေါ့ကဲ မပြောမိအောင် အခုတလော ကြိုးစား လစ်လျူရှုနေတာကို ပြောမိပြန်ပါပြီ…. ” ဆိုပြီး ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် မိုးမိုးရဲ့ပုံစံကို ထင်သာအောင် ပြောပြလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ ပရိတ်သတ်ကိုမချေမငံပြန်လည်ပြောဆဆိုလိုက်တဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ဗီဒီယိုကို အခုလိုပဲတစ်ဆင့်ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
ပရိတျသတျကွီးရေ… အနုပညာလောကမှာ တေးသီခငျြးမြားစှာကို သီဆိုထားတဲ့ အဆိုတျောမိုးမိုးဟာဆိုရငျ အခုလကျရှိမှာ မျောဒယျမွတျပီတိမိုးဆိုတဲ့အမြိုးသမီးနဲ့ လကျထပျထားပွီး ကလေးနှဈယောကျကိုပိုငျဆျိုငျထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော..။
မိုးမိုးဟာ စဈကောငျစီက ကငျြးပပွုလုပျတဲ့ သင်ျကွနျပှဲတျောမှာ ယုနျလေးတို့နဲ့အတူ တကျရောကျခဲ့တာပါနျော။ ဒါ့အပွငျ လတျတလော အှနျလိုငျးပျေါမှာလညျး ကိုဗဈကာလသင်ျကွနျတှငျးမှာ Live လှငျ့နရေငျး ပရိသတျတှကေို မခမြေငံပွနျပွောနတေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလညျး အတျောကို ပွနျ့နှံ့နတောပါနျော။
ကိုရီးယားတှငျ နထေိုငျတဲ့ ဆရာမ ခမျြးမွမွသျောကလညျး ” အဆိုတျော မိုးမိုးဆိုတဲ့ ဝကျကလညျး ကိုကျလိုကျတာတငမျးငမျးနဲ့ မွငျလို့တောငျ မကောငျးဘူး။ သူတို့ ပွောလို့သာ ပွောရတာ အဆိုတျောလို့။ အနူတောထဲ လူခြော လုပျတဲ့ အဆငျ့လောကျနဲ့ သီခငျြးလေး တဈပုဒျနှဈပုဒျ ကောကျဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ အဆိုတျော အနုပညာသညျ လုပျနတေဲ့ ဟာတှေ။ အသံက လမျးထဲက ပဲပွုတျသညျ မထားထကျ ပွဲသေးတယျ။
အဆငျ့မှီ အတနျးမှီနဲ့ ဆိုနိုငျတဲ့နိုငျငံကြျောဆိုရငျ liveထဲကနေ ထှကျလာပွီး အုပျစုလိုကျ ကိုကျမလား မသိဘူး။ ဝေါ့ကဲ မပွောမိအောငျ အခုတလော ကွိုးစား လဈလြူရှုနတောကို ပွောမိပွနျပါပွီ…. ” ဆိုပွီး ပွညျသူ့ခဉျြဖတျ မိုးမိုးရဲ့ပုံစံကို ထငျသာအောငျ ပွောပွလိုကျပွနျပါပွီနျော။ ပရိတျသတျကိုမခမြေငံပွနျလညျပွောဆဆိုလိုကျတဲ့ မိုးမိုးတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့ ဗီဒီယိုကို အခုလိုပဲတဈဆငျ့ပွနျလညျကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော..။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျပါတယျ…။
အရင်အချိန်က ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရဗီဒီယိုလေးကို ထုတ်ပြလာတဲ့ သန္တာဗိုလ်…..
သူမကို ဖမ်းဝရမ်းမထုတ် ခံရသေးပေမယ့်လည်း ခြိမ်းခြောက်စာ တွေတော့ ပို့ခံနေရတဲ့ မေပန်ချီ…..